Tuesday October 24, 2017 - 08:38:33 in Wararka by Super Admin
Markii ugu horraysay dowladda Turkiga ayaa ka hadashay wararka sheegaya in qaraxii khasaaraha badan dhaliyay ee isbuucii lasoo dhaafay ka dhacay Muqdisho lagu beegsan lahaa Saldhigga Melleteri ee Turkigu dhawaan ka furtay duleedka Muqdisho.
Safiirka Turkiga ee Soomaaliya ayaa Telefeshinka Al Jazeera u sheegay in ay ka argagaxeen weerarakaas loo qorsheeyay isagoo xarakada Al Shabaab ku eedeeyay in marwalba ay beegsato danaha Turkiga ee dalka Soomaaliya.
Warbixin uu baahiyay Telefeshinka Aljazeera ayaa lagu sheegay in ilo wareedyo dhanka amniga ay tilmaamayaan in qaraxii isgoyska Zoobe ka dhacay qorshuhu ahaa in lagu weeraro saldhigga melleteri ee Turkigu ka furtay Muqdisho.
Dowladda Turkigu waxay sheegtay in ay dadaal dheeri ah ay ugu jirto sidii ay u tababari laheyd kumanaan katirsan ciidanka DF-ka, Safiirka Turkiga ayaa carabaabay in saldhigga cusub ee Soomaaliya ay ka fureen ay ka howlgelayaan sedax hay’adood oo katirsan melleteriga Turkiga kuwaas oo kala ah ciidanka dhulka,ciidanka cirka iyo ciidanka Badda.
Xukuumadda Ankara ayaa markii ugu horraysay sheegtay in qorshaha ay ka leedahay hirgelinta saldhiggan uu yahay sidii ay ciidamadeedu lafdhabar ugu noqon lahaayeen ciidamada ay yeelanayso dowladda Federaalka taas oo ka dhigan in Turkigu uu awood dheeri ah ka raadsanayo Bariga Afrika.